‘लकडाउन’ बन्दको मानसिकता ! | मझेरी डट कम
san — Sat, 04/18/2020 - 14:24
साँझको समय कोठा अगाडिको बाटो हल्लाखल्ला सुनियो । के भएछ भनेर बाहिर निस्किएँ । टोलका युवाहरू भेला भएर कोही बाँस ओसार्दै थिए, कोही बाटो साना साना खाल्डा बनाउँदै थिए । एकछिन त्यही बसेर हेरिरहें । बाटोमा बाँसको खामाहरू गाडीए, ती खामाहरुमा लामा–लामा बाँसहरू बाँधेर बार जस्तो पारे पूर्ण रुपमा बाटो बन्द गरियो । मानिसहरुको आवत जावतमा कठिनाई हुने गरी यसरी बाटो छेक्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणले कसैलाई छुदैन भनेर दंग देखिन्थे उनीहरू ।
यो त राजमार्ग नजिकैको एउटा उदाहरण हो । लकडाउनको नाममा गाउँ जाने धेरै नाकाहरू यसरी नै बन्द छन् । त्यहीबाटो हुँदै अर्को गाउँ, बस्ती र टोलमा जाने सर्वसाधारणहरू सास्ती खेप्दैछन । कतै नाकामा मुढाहरू तेर्साइएका छन्, कतै रुख ढालेर बाटो अबरुद्ध गरिएको छ, कतै खामाहरू गाडेर जस्ताको पाताले बारिएको छ । यी दृष्यहरुले मलाई नेपालबन्दको आभास गरायो । विभिन्न माग राखेर विगतमा नेपाल बन्दका नाममा सर्वसाधारणहरुलाई दुःख दिने बन्दकर्ताको मनस्थितिसँग मेल खान्थ्यो उनीहरुको कार्यशैली र व्यवहार पनि । बाटोमा पाँच छ जनाको हुल जम्मा भएर यता बन्द छ, अर्कै बाटो जानुस् भन्दै केही मानिस वा सवारी साधन फर्काउँदैमा लकडाउनको अनुसाशन पालना हुने हो त ?
केही दिन अघि मेरै गाउँपालिकामा भारतबाट गाउँ भित्रिएका एक युवकमा द्रतगतिको परीक्षण (आरडिटी)को रिपोर्ट पोजेटिभ देखियो । जसले गर्दा गाउँमा एक किसिमको त्रास सिर्जना गर्यो । स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई कडाइ गर्यो । खाद्यन्न पसलहरू खुल्ने समय निर्धारण गरियो, बाहिरी व्यक्तिको आगमनलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिनुका साथै तरकारी, माछामासु, फलफुल जस्ताबस्तुहरू आयतमा रोक लगाइयो । स्थानीयहरुले सावधानीका उपायहरू अबलम्बन गर्न थाले । स्थानीय बासिन्दाहरुले नै वित्तीय संस्था नखोल्न अग्रह गरे । जसले गर्दा बैंक तथा सहकारीका कार्यालयहरू समेत बन्द भए । जिल्लाका अरु स्थानीय तहहरुमा यसको प्रभाव देखियो ।
आरडिटी रिर्पोटमा कोरोना भाइरसको संकेत देखिएकाले स्वाब परीक्षणको लागि उनलाई अस्पताल लगियो । स्वाब परीक्षणको रिर्पोटले उनीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नरहेको पुष्टि भयो अर्थात पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ देखियो । यो खुशीको खबर थियो । नत्र गाउँनै संक्रमणको शिकार बन्ने सबैलाई डर थियो । बाटोमा छेकबार लगाउने मध्येका एक युवा सोही दिन उक्त गाउँपालिकाको केही स्थानमा पुगेर फर्किएका थिए ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले हरेक मानिसलाई सताएको छ । यसको न्यूनिकरण र रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । सुरक्षित रुपमा घरमै बसेर लकडाउनको पालना गर्नु नागरीकहरुको दायित्व हो । महामारीको विरुद्धमा सरकारसँगै आम नागरीकहरू पनि अग्रसर हुनु पर्दछ । सुरक्षित रहने उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।
एम्बुलेन्स, प्रहरीको भेन, अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका साधन तथा पास लिएका मोटरसाईकल लगायत सबै किसिमका सवारी साधनहरुले बाटो नपाउँदा यसको असर कतै न कतै देखा पर्दछ । शहरमा त बैकल्पिक बाटोहरू हुन सक्छन्, तर भखरैमात्र विकासलाई अंगाल्दै गरेका गाउँमा प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नै बन्द गराए पछि आकस्मिक सेवा समेत प्रभावित हुन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको बेलामा हामीले सामाजिक दुरी कायम गर्ने हो । समाजको दुरी बढाउने हैन । सबै जना आ–आफ्नो घरमा सावधानीपूर्वक बसी आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने हो भने हाम्रो टोल, समाज आफैं सुरक्षित हुन्छ ।
तिम्रो यादमा रातैभरि